Nishtha App 2022 Download Ho an'ny Android | APKOLL
Ny mpampianatra dia manana ny anjara toerana lehibe amin'ny rafi-pampianarana. Mpampianatra ve ianao ary te hanatsara ny fahalalanao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny hoe Nistha App. Io no fampiharana Android farany, izay manolotra fampianarana ho an'ireo mpampianatra any amin'ny toeram-pampianarana.
Araka ny fantatrao dia tsy maintsy mianatra zavatra amin'ny olon-kafa ny olon-drehetra. Amin'ity vanim-potoana ity dia misy andrimpanjakana avo be erak'izao tontolo izao, ahafahan'ny mpianatra mianatra zavatra samihafa. Nisy ny zava-misy tany am-piandohana dia ny tokony hianarin'ny mpianatra irery no hifantohany.
Saingy rehefa hitan'ny olona fa miova izao tontolo izao, dia manomboka manova ny lamin'ny departemanta fanabeazana izy ireo. Ankehitriny ny olona dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fahaizan'ny mpianatra ho tanjon'ny mpampianatra. Nanomboka nanao tontolo tontolo sariaka niaraka tamin'ny mpianatra izy ireo ary nihatsara koa ny anton-javatra hafa.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa ity, izay manolotra mpampianatra samihafa hanatevin-daharana an'ity sehatra ity ary hahazo toeram-piofanana tsara indrindra. Manolotra ny sasany amin'ireo kilasy fiofanana tsara indrindra, izay ahafahan'ny mpampianatra manatsara ny fifandraisany amin'ireo mpianatra. Misy ny sasany amin'ireo fiasa tsara indrindra amin'ity rindranasa ity, izay hozarainay aminareo rehetra. Noho izany, mijanona miaraka aminay fotsiny.
Topimaso momba ny Nishtha App
Izy io dia fampiharana fanabeazana Android, izay novolavolain'ny filankevi-pirenena momba ny fikarohana sy ny fiofanana momba ny fanabeazana, India. Izy io dia novolavolaina manokana ho an'ny mpampianatra karana rehetra, izay ahafahan'ny mpampianatra rehetra mahazo fiofanana tsara indrindra. Izy io dia fampiharana maimaim-poana ao anatin'izany ny serivisy fanofanana.
Amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia afaka manana ny fampahalalana rehetra momba ny kilasy ny mpampianatra. Misy fizarana samihafa misy ao amin'ity rindrambaiko ity, izay manome fampahalalana fanampiny. Ao amin'ny fizarana voalohany amin'ny tranombokiko, ny mpampianatra dia afaka manangona sy mitahiry ireo rakitra, naoty, na PDF, ary antontan-taratasy hafa.
Ny fizarana faharoa dia tena zava-dehibe satria manome ny fampahalalana eo noho eo momba ny fampianarana natolotra. Amin'ity fizarana ity, ny mpampiasa dia hahazo ny vaovao farany momba izay misy fampianarana ho an'ny lohahevitra manokana. Fandaharam-potoana samihafa natolotra ho an'ny mpampianatra manam-pahaizana manokana.
Malaza ankehitriny ny mianatra amin'ny horonan-tsary ary mahasoa ihany koa. Noho izany, misy fizarana manokana, izay manolotra ny fanangonana fampianarana rehetra mifandraika amin'ny lohahevitra ary koa mifandraika amin'ny tontolon'ny kilasy. Misy ihany koa ireo fampianarana misy, izay ahafahan'izy ireo manao tontolo feno fitiavana ao an-dakilasy.
Ny mpampianatra koa dia afaka manao horonantsary sy hafatra samihafa amin'ny faritra hafa, ahafahanao maneho ny zavatra niainanao na ny fomba fanaonao. Ireo matihanina dia hitarika anao hanana valiny tsara marina kokoa. Misy endri-javatra mahavariana kokoa ihany, izay ahafahan'ny mpampianatra manatsara ny rafi-pampianarana eto amin'ny firenena.
Nishtha Apk dia hanatsara ny fomba fampianarana ary hahatonga ny mpianatra ho tia kokoa amin'ny fianarany. Hihatsara ihany koa ny fizotran'ny fianarana ary ho hita ao anatin'ny taona vitsivitsy ny vokatra azo. Io no fandrisihana tsara indrindra avy amin'ny governemanta ary tsy maintsy mankasitraka izany ny rehetra.
App fampiharana no fomba tsara indrindra hanesorana ny fomba fianarana taloha rehetra, izay miteraka tontolo ratsy ao amin'ny institiota. Amin'ny alalan'ireo taranja ireo, ny lehiben'ny institiota dia afaka mitazona tontolo iainana azo antoka sy salama ao an-tsekoly.
Hanampy fomba ara-javakanto vaovao ny mpampianatra, izay mahasarika mpianatra hafa hianatra. Izy io dia manome azy ireo hifandray amin'ny mpianatra ara-tsosialy, ara-pihetseham-po, ara-tsaina ary mandinika ny olana madinidinika rehetra. Mbola betsaka ny zavatra ho hita ao. Noho izany, misintona fotsiny Nishtha ho an'ny Android ary tadiavo izany rehetra izany.
anarana NISHTHA APP
Anaran'ny fonosana ncert.ciet.nishtha
Manolotra fiofanana maimaim-poana
Manome fomba vaovao
Hatsarao ny dingan'ny fianarana
Azo alaina ny Tutorial video
Rakitra PDF miaraka amin'ny fampahalalana rehetra misy
Interface tsotra sy mora
Hikaroka fampiharana fanabeazana misimisy kokoa etsy ambany.
Raha te hampidina ny rakitra Apk ianao dia tsy mila mandeha amin'ny toeran-kafa. Hizara ny kinova farany an'ity fampiharana ity izahay. Azonao atao ny misintona an'ity rindranasa ity amin'ity pejy ity. Tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Manaova paompy tokana eo aminy ary miandry segondra vitsy.
Nishtha App no ​​fampiharana tsara indrindra, izay hanatsara ny sampana fanabeazana rehetra. Iray amin'ireo dingana tsara indrindra avy amin'ny governemanta izany. Noho izany, tokony hampiasa ny serivisiny ny olona. Raha mila fampiharana sy hacks mahavariana kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Apps, fanabeazana Tags App fampiharana, Nishtha Apk, Nishtha App, Nishtha Ho an'ny Android Post Fikarohana